Bannaanbax looga soo horjeedo Yuhuudda oo ka dhacaya Soomaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Bannaanbax looga soo horjeedo Yuhuudda oo ka dhacaya Soomaliya
Magaalada Muqdisho waxaa ka socda abaabul loogu diyaar garoobayo bannaanbax weyn oo looga soo horjeedo ciidamada Israa'iil oo gudaha u galay Masjidka weyn ee Al-Aqsa iyagoo sidoo kalena duqeymo ka geystay marinka Qasa.
MUQDISHO, Soomaaliya - Mudaharaadyo ka dhan ah Yuhuudda ayaa lagu wadaa in ay maanta ka dhacaan waddanka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, mudaaharaadka ayaa looga soo horjeedaa weerarada Yahuudu ay ka geysanyaan Masjidka barakeysan ee Al-Aqsa iyo dhulka Falastiin.
Yuhuudda ayaa billowday duqeymo toddobaadyadii u dambeeyay kuwaasoo ay ku dileen tiro dad ah oo isugu jira caruur, haween, dhallinyaro iyo dad da' ah. Iyadoo sidoo kale gudaha u gashay masjidka Barakeysan ee Al-Aqsa, halkaasna ay ku dishay tiro falastiiniyiin ah oo ku cibaadeysanayay masaajidka iyadoo lagu guda jiro tobanka dambe ee bisha Ramadaan.
Isku soo baxa looga soo horjeedo tacaddiyada ay Yuhuuddu u geysanayaan Falastiiniyiinta ayaa la filayaa in uu maanta si rasmi ah uga dhaco qeybo kale oo kamida gobollada dalka, dadka shacabka ah ayaa dareenkooda ku muujinaya sida ay uga xun yihiin dhibaatada haysata walaalahood, waana isku soo bax aysan iclaamin dowladda iyo mas'uuliyiin kale toona.